अव त हामी जनता चेतौं
शाश्वत शर्मा - -
धेरैपल्ट सत्तामा पुगेर असफल भएको कांग्रेसले गत शनिवार ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार विरूद्धको प्रशर्शन र सभा आयोजना गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले आउँदा माघ ३ गते ७५३ पालिका र माघ ८ गते ६७४३ वडामा पनि विरोधसभा र प्रदर्शनको आयोजना गर्ने बताएको छ । कांग्रेसले अधिनायकवादी शैलीको विरोध गर्ने ? के भन्ने ? यो मुलुकलार्ई रसातलमा पु¥याउने मुख्य जिम्मेवार नै कांग्रेस हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेको यही हो ।
सभापति देउवाले संसद भङ्ग गर्नुलाई विरोध गर्न सुहाउँछ ? भ्रष्टाचार बढ्यो भन्न देउवाले मिल्छ ? फेरि तल्ला र मझौला कांग्रेसीहरू पनि कस्ता ? जे भने पनि हस् मात्र भन्छन् । सत्ताका लागि आफ्नो जन्मजात सिद्धान्त र नीति नै त्याग गर्ने कांग्रैसको सभामा जनभीड किन जान्छ , अझै पनि कांग्रेसी चेतेनन्, जनता सजग भएनन् । यो मुलुक कसरी सुध्रिन्छ ? शनिवारको कांग्रेसी सभामा भीड देखेपछि एक मित्र यसै भन्दै थिए । उनका तर्क थिए– देश बिगार्नेहरूप्रति अझै यत्रो मोह ? यो कांग्रेसी र यसका नेता गिरिजाप्रसादले, शेरबहादुरले, रामचन्द्रहरूले मुलुकलाई यसरी खाल्डामा जाके कि अब मुलुक उठ्नै नसक्ने भइसकेको छ । राष्ट्रघात, भ्रष्टाचारलाई मुख्य उद्देश्य बनाउने नेता र पार्टीप्रति अझे कार्यकर्ता एकोहोरो लागिरहने ? जनताको चेत खुल्ने कहिले ?
आगामी वैशाखमा चुनाव भो भने यही कांग्रेसले बहुमत ल्याउने सम्भावना छ । किनकि कम्युनिष्टको विकल्प तैयार भएकै छैन । पहिले कांग्रेसले धोका दियो, अहिले कम्युनिष्टले । चुनाव भयो भने फेरि कांग्रेसले जित्नेछ । पालैपालो यी सत्तामा जाने, जनताले दुःख पाउने ? यसको अन्त हुनुपर्छ अब ।
यो मुलुकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वाहेक अरू पनि राजनीतिक दलहरू छन् । अरू पनि नेताहरू छन् । तर अहँ, तिनलाई जनताले कहिले मौका दिएनन् । अरूलाई दिएर के फाइदा ? के हुन्छ र ? सबै उस्तै हुन्, बरू यिनैलाई दिऊँ । यस्तो मानसिकता छ नेपालीमा । अरूले चुनावै जित्दैनन् । अनि यिनैले जित्छन्, यिनैले निरङ्कूशता, सर्वसत्तावाद, नातावाद चलाउँछन् । पालैपालो सत्ता चलाउँछन् । देश र जनतालाई चुसिरहन्छन् । अझै रगत चुसाएर बस्ने हामी ?
फलानोले जित्दै जित्दैन भन्ने सोच राखेर हिड्ने हो जनताले । जनताले त गलतलाई हराउने र सहीलाई जिताउने हो ? सडक विद्रोहभन्दा यो विद्रोहले राजनीतिक सुधार हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसतिर जनताले सोच्ने बेला यही हो । जसलाई थाहा छ, थाहा नहुनेलाई बुझाउने बेला पनि यही हो ।
उही पुरानैले जितेसम्म विदेशी चलखेल बढिरहन्छ । विदेशीलाई देशका हित सुम्पिरहन्छन्, देशलाई कंगाल पारिरहन्छन् । यसकारण त गरीब झन झन गरीब भइरहेका छन् । चप्पल छापे नेताहरू लखपति, करोडपति, अर्वपति बनिरहेका छन् । यो सब देख्दादेख्दै पनि यिनकै सभा समारोहमा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति जनाउँछन्, जयजयकार गर्छन् । अनि भ्रष्टाचारी मात्तिदैन ? आफ्नो हातमुख जोर्न मुस्किल भएका जनता यस्ता काला धन्दावालहरूलाई काँध थाप्न तैयार हुन्छन् । लाग्छ, यिनलाई परिवर्तन भन्ने कुरा नै थाहा छैन । यिनले जनयुद्धको पीडा, जनआन्दोलनको दमन र परिवर्तनपछिको कालरात्रि सबै बिर्सिसके । यिनलाई चुनाव भनेको मतदान गर्नुमात्र हो । मतदान किन र केका लागि गर्ने भन्ने चेतना जनतामा अझै जागेको छैन ।
यसकारण त भ्रष्टाचारी ओली, देउवा, माधव, प्रचण्डहरू जनताका लागि अझे पनि देवतासरह लाग्छन् । मान्छे बन्न नसकेकाहरू देवता कसरी बन्छन् ? जनता सोझा छन्, साह्रै सोझा । यस्तालाई देवता मानेर जयजयकार गर्छन् ।
संविधानले कामै गरेन, न्याय नै दिएन । भ्रष्टाचार बढायो, भ्रष्टाचारी जन्मायो । संसद बिघटन भएर संविधान ध्वस्त भइसक्यो, तैपनि जनतामा चेत छैन । संविधान के हो, जनतालाई बिझ्दै बिझ्दैन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलव्धि के हो ? भनेर सोध्नसमेत सक्दैनन् जनता । यिनैलाई देवता मान्ने, कठै जनता । चुनाव भएर के भयो ? सरकार बनेर के आयो ? अव चुनाव भएर के हुन्छ ? यो कुरा नबुझेसम्म नेपालमा परिवर्तन आउन सक्दैन । आगमी दिनमा नेपाल र नेपालीको के हुन्छ ? जो नेता राज गरिरहेका छन्, ती नेपालका हितमा छैनन् भनेर कहिले बुझ्ने ? होनहार छन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, तिनले कहिले चिन्ने ? यसैगरी मुलुक डुब्ने, डुबाइरहने ? संसद बिघटन भयो, पुनस्र्थापना रे ? बिघटन यिनले गरे, पुनस्र्थापना भए के नभए के ? हुने यिनै हुन्, देश र जनताले पाउने सकस न हो । भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात न हो । यसकारण यी दुबैथरिको जयजयकारमा जनता नलाग्दा हुन्छ । सकिन्छ, बिद्रोहमा उत्रनुपर्छ, सकिन्न, चुनाव भइहाल्यो भने यस्तालाई परास्त गरिदिनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको होस्, राम्रालाई जिताउनु पर्छ । भविष्यका लागि यसको विकल्प छैन ।